Guusha Soomaalida UK & Gunuunuca Dowladda Kenya – Puntland Voice
July 7, 2013 2:58 pm Views: 17
Waa ilaahey mahadiise waxaa guul laga gaaray halgankii dheeraa ee muddada 8da sanaa qaatay kasoo looga soo horjeeday sharciga qaadka wadanka UK , kadib markii 3/7/2013ka ay wasiirka arimaha guduhu ku dhawaaqday in qaadkii gebi ahaanba laga mamnuucay wadanka ingiriiska.
Halmar ayaa warkaasu wuxuu gilgilay idaacadaha iyo websideyada soomaalida iyo kuwa kale ee aduunka , waxaa sidoo kale weli magaalada London ka soconaya ALLE bari iyo in xaflado lagu soo dhaweeynayo go,aanka kasoo baxay Teressa May wasiika arimaha gudaha.
Shaqsi ahaan waxay ii ahayd maalinkaasi maalin weyn oo aanan dareenkeeda qoraal lagu soo koobi Karin, waxaan oran karaa waxaan kufo oo dhacaba , waxaan kalahoon jarmaado, iyadoo weliba ay jiraan dad diidanaa in arintaasi suuro gasho ayaa waxaan halkayaga ka ilaaliyey inaan quusto, waana tii soomaalidu tiri wixii rag ukaco rabina aqbalo waa rumoobaan,’ HANTAY HIMALADAYDII ‘ilaahbaa mahadlehe.
Dhanka kalena waxaa dowlada ingiriiska soo gaaraya dhawaaq iyo qeylo dhaan kasoo yeeraya wadanka Kenya ,oo ku dhawaaqaya in laga noqdo go’aankaas ay ku tilmaameen mid hoos udhac weyn ku keenaya dhaqaalaha wadanka Kenya..
Arintaas waxaan u aragnaa nacasnimo iyo iska hadal dhicina mayso in go.aankaas laga noqdo marna, waxay kaloo beeraleyda Kenya ku goodinayaa in marka go,aankani dhaqan galo ay qaadka ku siyaadin doonaanSoomaaliya kana dhigi doonaan 3 jibaar qaadka soomaaliya la geeyo, taasna waxaa laga rabaa in madaxda soomaaliyeed ay difaacaan weerarka cirka ah ee diyaaradaha qaadka sida ee wadanka Kenya ku soo qaadayaan inay dhibaateeyaan caruurta Soomaaliyeed, inay ka oohiyaan hooyooyinka Soomaaliyeed, inay gurtaan dhaqaalaha wadanka, Sunta cagaarana ku dumiyaan maskaxda dhalinyarada.
Waxaan ugu baaqaynaa madaxda iyo masuuliyiinta soomaaliyeed in ay isku meel looga soo wada jeesto, qaadka oo aan ku tilmaamay ( GUMEYSIGA CASRIGA AH ) kasoo lagu guranayo maaliyadii Soomaalida, laguna duminayo maskaxda dhalinyarada.
Gud La dagaalanka Qaadka
Fallow on Twetter @ Abukar Awale